किन भएन देश विकास? माधव नेपालले सुनाए तीन अनुभव, भने- 'कसैले विकास रोके त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ' :: PahiloPost
किन भएन देश विकास? माधव नेपालले सुनाए तीन अनुभव, भने- 'कसैले विकास रोके त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ'
26th December 2016 | ११ पुष २०७३
म प्रधानमन्त्री हुँदा सङ्कल्प गरेको थिएँ, नेपाल वायु सेवा निगमका लागि जसरी पनि जहाज खरिद गर्ने। त्यतिखेर शरतसिंह भण्डारी मन्त्री हुन्हुन्थ्यो। मैले धेरैपटक उहाँलाई भनेँ- आँट गर्नुस् म सहयोग गर्छु। उहाँले भन्नुभयो- 'म यहाँ फस्नुछैन, जहाजको चक्करमा भोलि मलाई फसाइदिए भने के गर्नु?'
त्यसपछि म आफैँ तम्सिएँ र फाइल अगाडि बढाएँ। त्यसपछि अख्तियारले रोक्यो। फेरि अख्तियारलाई बोलाएँ र छलफल गरेँ। भोलिपल्ट पेपरमा के आयो भने 'प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अख्तियारको जिम्मेवार मान्छेलाई बोलाएर झाँको झारे।'
अब ठेक्का दिने भन्ने मात्र कुरा उठेको थियो, पेपरमा ठूलोठूलो अक्षरमा समाचार आयो 'बेनिबहादुर कार्की भ्रष्टाचारीको चङ्गुलमा, ठूलो कमिसनको खेल'। भोलिपल्ट बेनिबहादुरजी फाइल पल्टाउँदै पड्किनु भो- म यो कुनै कुरा गर्दिनँ, सही पनि गर्दिनँ। यो पनि गर्दिनँ, उ पनि गर्दिनँ।
एकपटक मैले पुल बनाउनका लागि भनेको थिएँ। एक महिनामा काम सम्पन्न भयो भनेर सचिवहरुले रिपोर्ट गरे। अनि मैले मुख्य सचिवलाई हेर्न पठाएको त काम फिटिक्कै भएको रहेनछ। सचिवलाई झपार्नेबित्तिकै मिडियामा आयो- 'प्रधानमन्त्रीले सचिवको मानमर्दन गरे' वाह!
किन भएन देश विकास? माधव नेपालले सुनाए तीन अनुभव, भने- 'कसैले विकास रोके त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ' को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।